Date My Pet » Efatra karazana Men Women Go Fa
Ny fanalahidin'ny am-pon'ny olona dia tsy alalan'ny kibony. Dia an-tsainy. Ny fampiasana ny psikolojia sy ny fandinihana afaka handresy anao ny lehilahy ny nofy sy hitondra any amin'ny fohy ezaka na ny olon-tiany mandritra ny fiainana sambatra. Na inona na inona ianao mitady amin'izao fotoana eo amin'ny fiainanao. Mahafantatra ny toetra sy ny zavatra mahatonga azy ireo mifidy dia manan-danja, ary afaka mitarika anao ho any amin'ny toerana mafy ao am-pony. Ity ambany ity ny efatra karazana Mens’ toetra sy ny fomba afaka manao izany olona izany ny anao.
Bandy, rehefa ho hariva dia ny karazana lehilahy izay mahatonga ny manana be dia be ny olona teo amin'ny fiainany. Mety ho tahaka ny karazana niaraka olona iray izay manana ny manodidina. Noho izany, noho izy mety ho midina ny pecking mba ao amin'ny tontolo. Ny endrika ivelany dia tena ilaina indrindra ho amin'ny mangatsiaka bandy. Na ny farany izy, dia manao na fironana maka manohitra ny lamaody fihetsika rehefa ho hariva bandy mandeha amim-pahatokiana amin'ny fotoana rehetra ary afaka Boarder ny eo-matoky indraindray. A mangatsiatsiaka bandy tia ho ivon'ny saina sy tsy tia anao upstage azy dia aoka izy manana ny saina. Cool ry zalahy toy ny hafa ry zalahy sy ny ankizivavy mahafinaritra sy mangatsiatsiaka manodidina ny tenany amin'ny olona izany raha miezaka manana toetra nerdy tsy mba hampiseho azy ireo ny orinasa mandra-be izy izany amin'ny fitiavana aminareo fa tsy manam-bola tsotra izao mba tsy ho eo amin'ny fiainany sy ny Tena tsy hampiseho azy ireo teo anoloan'ny ny namany! Cool ireto zaza ireto hihaino kokoa mazàna ny namany noho ny tena, satria ny firenena hafa izy ireo handray’ hevitra toy ny filazantsara ny ny fitsarana, mba tsy ho very tarehy.
The High handriny Bloke
Ny avo lehilahy handriny dia ny karazana lehilahy izay mifantoka foana dapper ary azo inoana fa ao amin'ny ady ho entiny. Dia mahatonga ny miresaka momba ny zavatra manjavozavo ao amin'ny mozika, vita an-tsoratra, sns … fa tsy ho tia avy hatrany an'ireo veers ny singa eccentric kokoa ny zavatra manjavozavo ao amin'ireo saha. Ny antony dia satria tena tsara izy ireo, na fara faharatsiny, izany no tiany ho hita: ara-tsaina sy araka ny tokony ho. Toy ny mangatsiaka dude
ny endrika ivelany dia tena zava-dehibe ho amin'ny handriny avo bloke. Misy mitady ho snobbish singa io ihany koa ny karazana lehilahy. Zava-misy TV sy ny toy dia fandaniam-potoana ho azy. Mba hahazoana amin'ny lehilahy toy izany ianao, dia mila miborosy ny amin'ny fahalalana mazava sy akanjo tena be pitsiny sy kanto. Fa izahao toetra tsy ho snobbish ao amin'ny dingana. Tadidio fa afaka mampiaraka ny snob tsy nisy snob ny tenanao. Singa iray hafa mba handinika amin'ny handriny avo bloke mihinana avy. Dia tsy ho tratra maty ao amin'ny fisotroana kafe amin'ny sakafo mora na MacDonalds. Dia mety kokoa ny hazan-dranomasina na tapas bar ianao hifarana any aminy.
Ny Boy-Next Door-
Ny zazalahy-manaraka-trano no madio-notapatapahina, mamy bandy. Tia misotro fa tsy BE LOATRA ary mitady tena mahazatra tahaka mozika, TV, sns … Ny fahadisoan-kevitra momba ny zaza-trano-manaraka dia satria izy no mamy rehetra sy ny mazava, Izay angamba marina. Mety hahagaga anao. Misy angamba ny lafiny doza izay mampiseho ihany no ho anao amin'ny tsy miankina. Enga anie tao amin'ny efitrano fandrian noho ny aminareo! Aoka ho tena ka tsy miezaka manova ny hoe iza izy ireo fa raha tsapanao fa niafina izy ireo ao ambadiky ny sary soa aman-tsara, ary tsy mamela ny tena tena avy ao amin'ny sehatra toy ny zava-nitranga matetika miaraka amin'ny ankizilahy be dia be--trano manaraka dia mamporisika azy ireo-katsaram-panahy hanao izany amin'ny alalan'ny fanehoana azy ireo fa tahaka ny tena izy sy izay koa. Kanefa aza manosika mafy loatra satria tokony hatao haingana amin'ny ny tahaka ny sarotra ny mamela ny tena avy any.
Ny nerd dia mitovy amin'ny handriny avo bloke amin'ny heviny ny mahalala be dia be ny zavatra manjavozavo. Na izany aza ny nerd mazàna ny tia izay tiany toy ny mifanohitra amin'ny zavatra ho tia avy hatrany an'ireo fampisehoana na mba hampiseho ny manan-tsaina izy ireo. Ary matetika ireo zavatra tsy mazava posh rehetra sy araka ny tokony ho. Ny nerd Tena tena sy ny endrika ivelany no zava-dehibe fa tsy izay rehetra. Misy endrika maro samy hafa avy amin'ny mpiangaly gadona rock nerds ho ny hippies ho Whovians (Doctor Iza mpankafy) ary Sci-ny fi mpankafy. Izy ireo no tena mahaliana ny olona matetika, fa nandroso ny olona, ​​satria mihevitra nerds dia mafy ho an'ny olon-tiany izay fahadisoan-kevitra iraisana. Nerds dia tahaka picky toy ny hafa rehetra sady tia ny hahita ny tsara resaka amin'ny mpiara-miasa. Misy mitady ho hasasarana ny nerd satria nerds matetika no nataony teo amin'ny lasa. Na iza na iza nahalala hafa be dia be no manana ny handeferako ka nahita hevitra ny fitokisana mety ho sarotra. Matetika nerds matetika hampiaraka nerds hafa satria izy ireo no tena mahazo aina amin 'izy ireo fa raha afaka hizaha toetra anareo dia malala-tsaina mety hitarika ho amin'ny mahaliana, mahafinaritra, malemy fanahy sy ny tsara fifandraisana.